အတတ်ပညာနှင့်ခေါ်ဆိုခြင်း - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-03 > အလုပ်အကိုင်နှင့်ခေါ်ဆိုမှု
ဒါဟာလှပသောနေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂါလိလဲအိုင်မှာနားထောင်နေသူတွေကိုယေရှုဟောပြောခဲ့တယ်။ လူများစွာတို့သည်ရှိမုန်ပေတရုအားလှေပေါ်သို့တက်။ လှေကိုဆိုက်ပြီးလျှင်၊ ထိုနည်းဖြင့်လူများသည်ယေရှုကို ပို၍ ကြားနိုင်ကြသည်။
ရှိမုန်သည်အတွေ့အကြုံရှိသောပညာရှင်ဖြစ်ပြီးရေကန်၏သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအန္တရာယ်များနှင့်အလွန်ရင်းနှီးခဲ့သည်။ ထိုသို့မိန့်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်တပည့်တော်တို့အားဝေငှတော်မူ၏။ သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံအရ၊ ဒီနေ့အချိန်၌ငါးများသည်အိုင်၏နက်နဲသောပင်လယ်သို့ပြန်သွားနိုင်ပြီးဘာမှမဖမ်းနိုင်ကြောင်းရှိမုန်သိသည်။ ထို့အပြင်သူသည်တစ်ညလုံးငါးဖမ်းခဲ့ပြီးဘာမျှမဖမ်းမိခဲ့ပါ။ သို့သော်သူသည်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မိန့်တော်မူသည်။
ထိုသူတို့သည်ပိုက်ကွန်ကို ချ၍ ငါးအလွန်များစွာသောငါးတို့ကိုအုပ်မိသဖြင့်ပိုက်ကွန်သည်စုတ်ပျတ်စရှိ၏။ အခုသူတို့အဖော်တွေကိုအကူအညီတောင်းတယ်။ အတူတကွငါးဖမ်းလှေများအချင်းချင်းမျှဝေနိုင်ခဲ့သည်။ လှေတစ်စင်းမျှငါး၏အလေးချိန်အောက်တွင်နစ်မွန်းသွားခဲ့သည်။
Jesus antwortete: «Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen» (Lukas 5,10). Jesus möchte uns ermutigen, mit ihm zu schaffen, was wir alleine nicht vermögen, weil wir unvollkommen sind.
ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှု၏စကားကိုယုံကြည်ပြီးသူပြောသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါက၊ သခင်ယေရှုအားဖြင့်အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်သူသည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်သူနှင့်အတူအသက်တာသစ်လက်ဆောင်များအားဖြင့်သူ၏သံတမန်များအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ယူထားသည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းကိုနေရာတကာသို့သယ်ဆောင်ရန်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုနှင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သောအခါလူများ၏ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှု၏တာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ရန်စွမ်းရည်များနှင့်အရည်အချင်းများရှိသောကြောင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ သခင်ယေရှု၏ကုသမှုခံယူသူများအနေဖြင့်၎င်းသည်လူများကိုဖမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
ယေရှုသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောကြောင့်၊ သူသည်မိမိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ရန်သူ၏ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေကြားပါသည်။ ယေရှု၏မေတ္တာ၌